Jasiiradda Jasiiradda Zanzibar , oo dhaqday Badweynta Hindiya, waxay siin doontaa dalxiis cajiib ah dalxiis kasta. Qoryaha cad cad ee ku yaal xeebta iyo biyaha badda ku wareegsan kuma tagi karaan kuwa aan jecelahay ee xeebta ama suuxdinta leh dhadhan saafi ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad si isdaba-joog ah u kala-duwanaato fasaxaaga, waa inaad iska hubisaa liistada safarrada Zanzibar . Waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah halkan, laakiin marwalba waad ka heli kartaa wax aad dhadhankaaga. Qiimaha dalxiiska ee Zanzibar ayaa celcelis ahaan kala duwan min $ 20 ilaa $ 200. Si kastaba ha ahaatee, xaddiga sare ma aha xadka - waxay noqon kartaa mid qaali ah, iyadoo ku xiran heerka raaxada iyo xilli .
Goobaha safarka ee ku wareegsan jasiiradda ma sameyn doonaan wax dhibaato ah. Ku dhawaad hudheel walba waxaa ku yaal miiska socdaalka ama hagayaal gaar ah kuwaas oo diyaar u ah inay dhagaystaan ​​oo ay xaqiijiyaan rabitaankaaga. Socdaalka Zanzibar , sida caadiga ah, waa shakhsi. Waa wax aan suurtagal ahayn in la ogaado in ay ka raaxo badan tahay safarada waaweyn ee basaska, kuwaas oo si khaas ah uga fogeynaya xiriirka shakhsi ahaaneed ee hagaha.
Bandhigga Magaalada ee Stone Town
Stone Town , aka Stone Town waa qayb taariikhi ah oo ku taal magaalada caasimadda ah ee Zanzibar. Waxaa jira waxyaabo badan oo halkaa ka socda oo xiiseynaya dalxiiska booqashada. Waxaa ka mid ah Golaha Wonderers , Carabta Old Carbeed, Kaniisadda Anglican , Aqalka Livingstone , Matxafka Dhaqanka iyo Taariikhda Swahili. Waxaad booqan kartaa suuqa maxaliga ah. Si kastaba ha noqotee, way ka fiicantahay in aadan halis galin dadka iyo dadka la yaabka leh - waxaa jira xaalado niyadjabsan oo jira. Si aad u iibsato wax kale laguma talin, laakiin halkan waxaad ku raaxeysan kartaa dhadhanka deegaanka iyo badnaanta miraha kala duwan. Stone Town waa shay ka mid ah dhaxalka dhaqamada dunida ee UNESCO.
Haddii hudheelkaada aadan ka awoodin inaad ku heshiiso dalxiis, ama haddii aad qorsheynayso safar, waxaad si toos ah uga heli kartaa tilmaan waddada. Waxaa jira hage ku filan oo wanaagsan, laakiin, inta badan, wadahadalka waa inuu ahaadaa Ingiriisi. Haddii aad si kalsooni leh ugu kalsoon tahay awoodahaaga iyo fursadaha internetka moobaylka, waxaad ku safri kartaa meelo xiiso leh oo kali ah. Si taas loo sameeyo, waa ku filan inaad ku qorto liiska goobaha aad rabto inaad soo booqato oo aad kireysato taksi ilaa 2-3 saacadood. Guud ahaan, booqashada Stone Town waxay kugu kici doontaa $ 20- $ 40.
Haddii aan lagu dhicin, waxaad dhihi kartaa waxaa jira dhir udgoon ee Zanzibar. Cuntada kasta ee cuisine ee dhaqameedka ah ayaa si deeqsinimo leh u dhajisey dhir udgoon. Oo wax shaki ah maaha, sababtoo ah dhirbaaxada ayaa koray halkan jasiiradda. Sidaa daraadeed, mid ka mid ah safarrada ugu caansan ee Zanzibar waa safar beeris ah. Jidka jidka ah, hagaha ayaa kuu sheegi doona arimaha ku saabsan jidkaaga - waa burburinta qalcadda Marquubi, Palace of Sultan iyo Bath Persian Baths.
Waa inaadan filanin in dhab ahaan laguu keeni doono beerasho buuxda, maya. Waxay ku yaalaan dhulka gaarka loo leeyahay, dadka ajnabigana lama ogola. Digniintaada waxaa lagu soo bandhigi doonaa beer yar yar, oo ah meelo kala duwan oo ka soo baxa dhirta kala duwan, ka dib markaa dhirta iyo dhirta la sameeyo. Carnation, ginger, cardamom, basbaas, qorfe, dhir iyo xitaa qaxwaha qaxwada. Guud ahaan, safarka ayaa qaadan doona qiyaastii 4 saacadood wuxuuna kaa qaadi doonaa $ 50 illaa $ 80.
Dibad-baxa jasiiradda Zanzibar waxa uu ku lug leeyahay socod maraya National Park, oo sidoo kale loo yaqaano kaynta Josanni. Waxaad ku jiri doontaa 3 saacadood roobka ugu xoogan ee ku hareeraysan deganayaasheeda nabada - kolobuska guduudan. Daanyeerkan noocan ah wuxuu leeyahay muuqaal raaxo leh oo aad u feejigan. Jardiinada waxaa ku jira in ka badan 40 nooc oo shimbir ah, iyo sidoo kale halkan waxaad ka heli kartaa xayawaan sida nasiibka ah sida antelope, duker, leopard, viverra. Goobaha waxaa badanaa lagu qabtaa Ingiriis. Si kastaba ha noqotee, maaddadu waa mid aad u fudud in xitaa heerkul hooseeya celceliska, waxay kuu noqon doontaa mid aad u cad in waxa hagaha ka hadlayo. Qiimaha safarka dalxiiska ee Zanzibar wuxuu noqon doonaa $ 50 ilaa $ 90.
Booqashada indha-indheynta jasiiradda ee xabsiga waxay ujeedadeedu tahay inaysan arag wax xabsi ah oo aan xabsi ku jirin oo aan ahayn maxaabiis tiro badan oo dhar ah. Dhamaan kooxdani waa la nuugin karaa, gacmahana laga quudin karaa, qoortooda qashin-guud ahaan, si buuxda ugu raaxaystaan ​​is weheshi. Sida noocyada maxaliga ah ee maxaliga ah, xayiraadda Seychelles aad ayay u nabdoon tahay. Safarka halkan wuxuu qaadanayaa qiyaastii 6 saacadood, kharashkuna waa kala duwan yahay $ 50 illaa $ 80.
La soco dolphins
Safarkan, sida kale ee Zanzibar, ayaa soo bandhigi doona farxad iyo farxad badan. Doonta alwaaxa ah, oo leh qalab gacmeed iyo maraakiib, waxaad u fuuli doontaa adigoo raadinaya bacaha bacalka ah ee ku nool meel u dhow jasiiradda. Incredible, laakiin la ehelada halkan waxaad ku dabbaalan kartaa! Munaasabadani waxay qaadataa qiyaastii 6 saacadood waxayna kaa qaadi doontaa $ 80 illaa $ 120. Haddii aad u safartid keligaa, waxaad had iyo jeer aadi kartaa xeebta halkaas oo doonyaha ay ku saleysanyihiin, iyo inaad la socotaan dadweynaha maxaliga ah ee lagu arko golfin. Waxay noqon doontaa wax yar oo raqiis ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fahamto in qaabkan socdaalka safarku uu jiro halisyo.
Tansaaniya way caan ku tahay caalamka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro madadaalo sida jasiiradda ah. Si kastaba ha noqotee, ha degdegin si aad u xanaaqdo - Dalxiisyada ku yaala dhulalka waxaa laga soo ururiyaa Zanzibar. Sida caadiga ah, tours ayaa ka bilaabanaya Arusha . Jasiiradda waxaa ka jira duulimaad joogto ah oo loo maro magaaladan. Sidaa darteed, waxaad dalban kartaa socdaal safar ah oo ka socda shirkad degaanka ah (oo ay ka mid yihiin diyaarinta duulimaad), ama u duulo adigoo gaar kuu ah oo hore u jiray Arusha oo raadiya madadaalo jeebkaaga. Safarka noocan ahi wuxuu kuugu kici doonaa $ 600- $ 2000.
Maxaa kale oo aad naftaada ugu soo dhawaynayso Zanzibar?
Dhab ahaan, liiska dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo dalxiisyada waa weyn. Tusaale ahaan, waa inaad hubisaa ugu yaraan dhowr saacadood oo waqtigaaga ah oo isku day inaad naftaada ku daadiso . Qiyaastii Zanzibar waa dhul aad u qaali ah oo biyaha hoostiisa ah, maxaa yeelay jasiiraddu waxay hareereheeda hareeraha geela. Waxaa jira xitaa dalxiis gooni ah "Blue Safari", kaas oo kuu ogolaanaya inaad naftaada u aragto.
Goobaha xiisaha iyo madadaalada ee dalxiisyada loogu talagalay Zanzibar waa tuulada dhaqanka kizimkazi , beeraha algae, geela Borib, godadka addoonta, beerka. Dalxiisayaasha ku sugan Zanzibar ayaa lagu talinayaa in ay soo booqdaan maqaayadda cunnada Qaranka Rock. Waa arrin xiiso leh maxaa yeelay waxay ku taallaa dhagax yar oo ku yaal badhtamaha badda. Waqtiga caadiga ah, dalxiisayaasha ayaa halkan la keenayaa doonta, laakiin qosolka hooseeya waxaad u socon kartaa xeebta. Wax kasta oo ay ahayd, safar kasta ama dalxiis kasta oo aad dooratid, hubi - dareenka wanaagsan ee kuxiran!
Zanzibar - xiliga fasaxa
Beerta Qaranka ee Kizit-Mpunguti
Waa maxay faa'iido for canab madow?
Qalabka 3D ee derbiyada gudaha
Jasiirada buluugga ah
Wiilkii hore ee Heidi Klum kama qoomamoonayo inuu la xiriiro gabadhiisa
Markaad cunuga ku quudiso 8 bilood?
Magaca Daria micnaheedu waa maxay?
Ciyaaryahan saxaafada ah
Fidinta qaboojiyaha - sida loo jaro dhinacyada?
Nickname for gabdhaha York
Caabuqa sambabada - calaamadaha iyo daaweynta
Liiska daawooyinka bilaashka ah ee haweenka uurka leh
Wadnaha oo aan isbeddelin - calaamadaha iyo daaweynta
Baalalka Ichthyol ee boogaha
Sidee loo sameeyaa khudbado?
Fikrado macquul ah dharka
Cream of jiis farmaajo